५० लाखको कार चढ्ने ज्ञानेन्द्र शाही फेरि हेलि’कप्टर किन्दै! यस्तो छ उनको आयस्रोत…सेयर गर्नुहो’ला….. ८ असार २०७८, मंगलवार ०७:५० – Nayabook
५० लाखको कार चढ्ने ज्ञानेन्द्र शाही फेरि हेलि’कप्टर किन्दै! यस्तो छ उनको आयस्रोत…सेयर गर्नुहो’ला….. ८ असार २०७८, मंगलवार ०७:५०
काठमाडौं :- पछिल्लो केहि समयदेखि सामा’जिक संजा’लमा आलोचनाको पात्र बन्ने व्यक्तिहरु बाध्य एक ज्ञानेन्द्र शाही हुन्। उनी मात्र नभई आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला पनि एक हुन्।यी दुई व्यक्तिको नाम प्राय जसो सामाजिक संजा’ल चलाउनेको लागि अपरिचित व्यक्ति होइनन्। कहिले विभिन्न विषयमा आवाज उठाउदै प’क्राउ पर्दै हि’रा हुँदै आएका यी दुईको चर्ति’कला पछिल्लो समय देखिन थलिएको छ।
विभिन्न समस्यामा समाजसेवाको नाममा’ काम गर्दै आएका यी दुईजना केहि समयदेखि निकै आ’लोचनाको सि’कार बन्न पुगे। कारण थियो स्थानीयसँग गरेको झग’डा र पत्रकारलाई ध’म्की’। केहि समय अगाडी ज्ञानेन्द्र शाही र स्थानीयबीच सुर्खेतमा झ’डप भयो । राहत बाँड्न गएका बेला स्थानीयको स’मू’हले आफू’हरु माथि कु’ट’पिट गरेको शाहीको दा’बी थियो ।
तर, जिल्ला प्र’हरी कार्यालय सुर्खेत’का एसपी राजेन्द्र भट्टले शाहीको समूह खाना खाएर फर्कदै गरेको र मजदुरी काम गरेकाहरु पनि फर्कदै गर्दा बाटोमा विवाद भएर झग’डा भएको बताए । अर्की आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौलाले पनि यही समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि शाहीले त्यहाका पत्रकारद्वय शिखा श्रेष्ठ र धिरज बस्नेतलाई टेलिफोन’बाट अप’शब्द प्रयोग गरी ध’म्की’समेत दिएकी छन् ।
त्यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आ’पत्ति जना’एको छ ।ज्वाला संग्रौलाले विभिन्न स्थानमा राहत वितरण गर्दै पनि आएकी छन् । यस्तै, विभिन्न समस्यामा परेकाहरुलाई पनि सह’योग गरेको उनको गतिविधि देखिन्छ ।तर, तिनै संग्रौला राहत बाँड्न जाने क्रम’मा काठमाडौंको महाराजगञ्जमा प्रह’री सहा’यक नि’रीक्षक (अ’सई) मणिकान्त झासँग ‘विवाद भयो । उनले प्र’हरी कार्यालयमै ब’र्दीमा रहेका प्रह’रीलाई थकाईनन् मात्र ‘एनि हाउ’ सरु’वा गराइदिने चेतावनी पनि दिइन् ।
झा’ले राहत बाँड्न हिँडेका संग्रौलाको टोली’लाई सवारी पास नभएपछि रोकेका थिए । अरु परिचयपत्र र लाइसेन्स पनि नभएको प्रह’रीको दाबी छ । संग्रौलाले वादविवा’दमा क्रममा रंग’भेदी टिप्पणीसमेत गरेकी छन् । शाहीमाथि अर्को ठुलो आ’रोप लागेको छ। शाहीमाथि पुरानो ऋण नतिरेको आरोप छ । शाहीले विभिन्न व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ वर्षौंदे’खि नतिरी सामाजिक अभियन्ता बनेको बताइन्छ ।
केही वर्षअघि काठमाडौंमा व्या’पार गर्दाको पैसा शाहीले तिरेको देखिएन । जुम्लाका ज्ञानबहादुर शाही अरुको पैसा नतिरेर सामाजिक अभियन्ता बनी एकाएक ज्ञानेन्द्र शाहीको रूपमा प्र’कट भएका हुन् । २०७४ सालताका उनले अरु तीन जनासँग मिलेर काठमाडौंमा विद्युतीय सामान बेच्ने अनला’इन व्यापार शुरु गरेका थिए ।
काँडाघारीमा कार्यालय खोलिएको शाही’को कम्पनीको नाम केटिएमबज डट कम थियो । केही समयपछि उनीहरुले विद्युतीय सामानसँगै खाद्यान्नसमेत अनलाइनबाट बिक्री गर्न थाले । त्यहि समय पार्टनरबीच खिचलो शुरु भ’यो र छुट्टी भिन्नसमेत भयो ।
हीले काँडाघारीको पुष्कर बच’त तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ६ लाख ४१ हजार र एभरेष्ट बैंकको १ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँको मिति उल्लेख नगरिएको चेक काटेका हुन् ।
एक अधिवक्ताका अनुसार शा’ही एक वर्ष अगाडी सम्म एक संस्थामा १५ हजार स्यालरीमा काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार शाही एक वर्ष अगाडीसम्म अधिवक्ताहरुले महिनाको १५ हजार पैसा दिंदै आए’का थिए ।
शाहीले विदेशमा बसेका नेपाली जनता’हरुले समाजसेवाको लागि पठाएको पैसाले गाडी किनेको स्रोतले बतायो। ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहका धादिङ् जिल्लाका संयोजक दिपेन्द्र शर्माले शाहीको आयस्रोत खुलाएका छन्। शाहीको लागि विदेशबाट आएको सहयोग रकमले नै खरिद गरिएको खुलासा गरेका छन्। उनले शाहीको लागि विदेशबाट नेपाली जनताले पठा’एको रकमले नै उक्त गाडी खरिद गरिएको जानकारी दिए।
उनले ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि नेपाली जन’ताले सहयोग गर्दा के समस्या अरुलाई भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले नेपाली जनताको लागि सहयोग गर्ने समाजसेवा गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि हेलिकप्टर किन्दिन पनि तयार भएको दावी गरेका छन्। मनकारी नेपाली जनताहरुले सहयोग गर्दा अरुला’ई किन टाउको दु’खाई भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि सबै रकम विदेशबाट आएको दावी गरे।(श्रोत: सामाजिक सञ्जाल